Roa herinandro lasa izay taorian'ny faharesena lehibe. Nandritra izany fotoana izany dia nanazatra be ny ekipa. Nandritra izany fotoana izany dia niresaka momba ny lesoka vitany ireo mpilalao nandritra ny fahareseny 10-0. Lalao hafa no notanterahina androany ary tsy nisy naniry hanao fahadisoana toy izany intsony. Talohan'ny lalao dia nivory ho an'ny dinika fohy ny ekipa.
Ny valin-tenin'ireo mpilalao dia nidradradradra nanerana ny efitrano fisoloana akanjo. Ekipa fialamboly fotsiny izy ireo izay nankafy ny baolina kitra, saingy tamin'io andro io dia niaina zavatra tsy hohadinoin'izy ireo tamin'ny fiainany ireo mpilalao. Na dia resy indray aza dia afaka nankafy ny antsasaky ny lalao izy ireo feno. Betsaka ny toe-javatra nahamenatra teny an-kianja. Na izany aza, noraisin'ireo mpilalao tamin'ny hatsikana izany.
"Zavatra iray no azo antoka," hoy i Dominik. “Mbola lavitra ny fanatanterahana ny zava-bita farany ambony vitantsika. Fa hilavo lefona ve isika? ”“ Tsia. ”“ Sanatria. ”“ Tsia. ”“ Tsy kivy izahay. ”Mbola nisy mpilalao nanome ny heviny indray. “Tsy kivy mihitsy izahay. Fa inona no hataontsika ry namako? ”Hoy i Dominik nanontany. “Hijanona eo amin'ny baolina ihany isika!” Niaraka niantsoantso ny mpilalao rehetra ary nitsiky izy ireo afa-po.
Tantara fohy ho an'ny ankizy - tadio
Tantara fohy ho an'ny ankizy - fampitahorana amin'ny sehatra
Tantara fohy ho an'ny ankizy - bear teddy
Tantara fohy ho an'ny ankizy - fialan-tsasatra
Tantara fohy ho an'ny ankizy - sekoly vaovao, namana vaovao
Tantara fohy ho an'ny ankizy - tsy nampoizina
Soccer fandokoana baolina kitra ho an'ny olon-dehibe